नेपालसँग सम्वन्ध विगारेको भन्दै मोदी माथि खनिए राहुल गान्धी ,तत्काल जवाफ दिन माग – Nepal Insider
उपचारको क्रममा यति धेरै रि’न भएर खेतबारी बे’चेर नपुगेपछि आमा बिदेसिनु परेको छ, [सहयोग को अपिल] सक्दो शेयर..
लद्दाखबाट भारतीय सेनालाई हटाउँदै चिनियाँ सेना
‘ राजाको ठाउँमा अहिले तेस्तै नयाँ मान्छे आएर देश लुटिरहेको छ ’ – सांसद झाँक्री
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालसँग सम्वन्ध विगारेको भन्दै मोदी माथि खनिए राहुल गान्धी ,तत्काल जवाफ दिन माग
काठमाडाैँ– एजेन्सी । नेपाल र चीनसँगको सम्बन्धमा आएको दरारका विषयमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले भारत सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् ।
सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीका क्रममा कांग्रेस नेता गान्धीले भारत सरकारले पछिल्ला दिनमा देखिएको नेपाल र चीनसँगको दरारका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीकै समयमा मंगलबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले पछिल्ला दिनमा नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा जारी तनावका विषयमा सरकारलाई विभिन्न प्रकारका प्रश्न सोधेका छन् । उनीे भन्छन, ‘सत्य के हो ? सरकारले राष्ट्रलाई जानकारी गराउनु पर्छ । सीमा क्षेत्रमा भइरहेका सबै गतिविधिहरुका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु सरकारको दायित्व हो ।’
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेताहरु नेपालविरुद्ध उभिँदा विपक्षी कांग्रेसले भने सम्बन्ध बिगारेको भन्दै सत्तारुढ भाजपाको आलोचना गरेको छ । गान्धी भन्छन्, ‘नेपालसँग के भएको हो ? लद्दाख क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? सरकारले प्रष्ट जानकारी दिनुपर्छ । सरकार पारदर्शी बन्नुपर्छ ।’
भारतले नेपाली भुमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाएपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। नेपाल सरकारले भारतको कब्जामा रहेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नेपालको नयाँ नक्साप्रति भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
यस्तै पछिल्लो केही दिनयता भारत र चीनबीचको सीमा विवाद पनि सतहमा आएको छ। लद्दाखमा चिनियाँ सेना आफ्नो भुमिमा प्रवेश गरेको भारतले आरोप लगाएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप ५ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या १४२ पुग्यो
बाँझो जमिन खनजोत गरी प्रयोग गरेमा ३ हजार देखि एक लाखसम्म अनुदान
‘मेरो मिल्ने साथी आईजी भएकोमा आप’त्ति हुने कुरै छैन’, उनलाई सहयोग गर्छु